Zviratidzo Zvemagariro, SEO, uye Maitiro Avo Kune Mumwe Nemumwe | Martech Zone
Zviratidzo Zvemagariro, SEO, uye Maitiro Avo Kune Mumwe Nemumwe
Muvhuro, Nyamavhuvhu 31, 2015 Muvhuro, Nyamavhuvhu 31, 2015 Douglas Karr
Matt Cutts akagovana vhidhiyo kwaakakurukura dambudziko iro mainjiniya vangave naro kana vakagadzira kutsamira pakati peiyo Google chinzvimbo algorithms uye zvemagariro zviratidzo. Muchidimbu, zvingave zvine njodzi huru kuvaka uku kutsamira muchiitiko icho icho pasocial media chikuva chingavharira kutsvaga kana kuwira mukuzivikanwa.
Ini handina mubvunzo kuti iyi ndiyo kesi, asi ari runyerekupe tsungirira sevashandi vekutsvagisa injini vanowanzoona kuwirirana pakati peyekuchinja misoro yemagariro uye kutsvagisa enjini yekutsvaga. Sekudzokorora kwaMat, izvo hazvisi zvikonzero, zvakadaro. Isu takagovana pfungwa dzedu pa kukanganisa kwesocial media paSEO kare, asi ngatikurukurei zvemagariro zviratidzo uye kuti zviviri izvi zvakabatana sei.
Fans uye Muteveri Kuverenga - Kana iwe uri akasimbiswa, anozivikanwa chiremera mune yako indasitiri, iwo mikana yakanaka kwazvo kuti iwe wakanyorwa nezve online. Pamwe iwe wakataura pazviitiko, ukaita mabvunzurudzo, wakanyora nhare, kana kuita kuti vanhu vataure nezvebasa rako. Chero ipi yeaya ataurwa, chokwadika, yaigona kutyaira ese ari maviri ma link kwauri. Ehezve, kuzivikanwa uku kungave kuri kuchaira kwakasimba kunotevera online kana uri kushingairira kushandisa vezvenhau. Zvemagariro zvinotevera zvinogona kunyanya kunyepedzera, zvichiita kuti kuverenga kuve kusingafungidzike pakuisa chinzvimbo.
Kugoverana Kwemagariro - Zvemagariro enhau zvinopa imwe yeanoshanda uye anoshanda nzira dzekugovana ruzivo pamhepo munzvimbo dzakakodzera. Goverana kumwe kwekutanga kutsvagisa kwekutanga kana chidimbu chinogombedzera chemukati uye hauzoshamiswa kana chikapararira semoto wemusango ukasvika kuvanhu vazhinji Zvemagariro enhau zvikamu zvinowanzove nzira yandinowana nayo nezve maturusi matsva kana zvidzidzo, zvichikonzera kuti ndinyorwe nezvavo nekugadzira backlinks. Kunyange huwandu hwakawanda hwekugovana pasocial husingakonzere chinzvimbo, chinoenderana nehukuru hwepamusoro.
Nekuti hapana kuwirirana kwakananga hazvireve kuti hapana chinokanganisa, zvakadaro. Kana ini ndikawana sosi yakakura kana chikuva pakutsvaga, ini ndichaigovana pane yangu yemagariro media account. Kana ndikawana chishandiso pasocial media uye ndikachigovana nevateereri vangu vakawandisa, zvingangotungamira kune zvimwe zvinyorwa uye backlinks inotyaira chinzvimbo. Saka kunyange pasina kuwirirana kwakanangana, pane chinongedzo chisina kunangana icho chiteshi chega chega chinogona kuve nacho pane chimwe.
Kushandisa nzira mbiri idzi kunovandudza mhedzisiro yeimwe. Usaregeredza uyu mukana! Heano mamwe matipi makuru kubva Kukura Kwemagariro yemagariro mamaneja maneja kuti aenderane neye organic yekutsvaga enjini yekugadzirisa nzira.
Social Media Kugovana iri Kukura
Parse.ly achangobva kuburitsa mushumo uyo Facebook ikozvino yakunda Google semutungamiriri wepamusoro kune vaparidzi. Kuderera uku kwakakosha kuti vaparidzi varambe vachifunga. Kana iwe uri kudurura zvese zvaunoedza kuita mukutsvaga kweinjini yekutsvaga uye mikana ye backlink, uye usiri kugadzira rakakura rezvenhau zano, mikana yekuwana vateereri vatsva iri kuderera.
Tags: Search Engine Optimizationseomagariro enhauzvemagariro vezvenhau zanomagariro ekugovana munharaundamagarirohurongwa hwevanhu
LeadSift: Bata Chinangwa uye Chiitiko Chinonzwisisika neSocial Media
Nhare Yekufambisa uye Kukanganisa Kwayo paMitambo